musha United Kingdom vatambi Kit Harington Childhood Nyaya yezve Untold Biography Facts
CB inopa Nhoroondo Yakakwana yeActor Chirungu uyo ​​anozivikanwa zvikuru nezita rokuti "Jon Snow ". Our Kit Harington Childhood Indaba pamwe ne Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvakakurumbira kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, hupenyu hwemhuri / mamiriro ezvinhu uye dzakawanda OFF uye ON-Screen zvishoma zvichakazivikanwa pamusoro pake.
Hungu munhu wose anoziva Jon Jon wake unhu huri muHBO terevhizheni Mutambo weZigaro. Zvisinei, vashomanana chete vanofunga nezveKit Harington's Bio iyo inofadza chaizvo. Iye zvino pasina kunze kwekudaro, ngatitangei.
Kit Harington Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Upenyu Hwekutanga
Kit Harington ane zita rekuberekwa Christopher Catesby Harington akazvarwa musi we 26th waDecember 1986 mu Acton, London, United Kingdom. Akaberekerwa nababa vake, Sir David Richard Harington (bhizimisi) uye kuna amai vake, Deborah Jane Catesby (aimbova mutambi wemutambo).
Kuberekwa nevabereki vaida uye vaitsigira, kamu kaduku (Kuruboshwe Kwekufananidzirwa) yakakurudzirwa kuva chero chaaida kubva kubva muhucheche uye yakapiwa kuenda-mberi kutevera uhu hwake hwehuduku hwekubatanidzwa mumasikirwo emitambo nemutambo.
Kit Harington Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Dzidzo uye Hobby
Baba vaKit vakakurudzira kuti aone mitambo uye kuronga zvirongwa zvekuenda kuchikoro chipi nechipi chema drama chekuzvisarudzira apo amai vake vakazviita basa rake kuchengetedza zvido zvemwanakomana wavo zviripo nekuverenga zvinotamba kusvika pakufara kwake panguva yekudya kwake.
Vakanyatsoona kuti zvakakosha zvakapiwa dzidzo yaKit kuburikidza nekuinyoresa mumasangano makuru ekudzidzisa panguva iyoyo. Zvinozivikanwa pakati pezvimwe zvikoro kwaiva Southfield Primary School iyo Young Kit yakawana dzidzo yekutanga kubva ku1992 kusvika ku1998 isati yaenderera kuChantry High School (1998 kusvika ku2003).
Kit Harington Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Career Buildup
Sezvo Harington kititi yakaenderera mberi nekutsvaga zvaaifarira zvakatora kusiyana kwakasiyana apo iye aifunga pfungwa dzekuva mutori wenhau, asi akadzivirirwa mushure mekuona kuti zvakanga zviri nyore sei kuti munhu abhare kuti aongorore journalism, ruzivo rwaive rwakasiyana zvikuru ne nzira yakaoma yekupinda muzvikoro zvepamusoro muLondon.
Aine chivimbo chekuti chikoro chema drama ndarama yegoridhe iyo inofanidza zvido zvekugadzira, vechidiki Kit akafamba nenzira dzakaoma dzekuzvidzivirira nzvimbo yekutanga paWorcester Sixth Form College mu (2003- 2005) asati apfuurira kuCentral School of Speech uye Drama paYunivhesiti yeLondon, yakanga isina nguva refu asati apinza ndarama pashure pokunge apedza kudzidza mu2008.
Kit Harington Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Simuka Mukurumbira
Paaiva muchikoro cheTram, Kit akanga akashanda nesimba pakuita uye akaisa basa raAlbert muNational Theater kufanana kweHarry Horse. Akasangana muHarry Horse yakave yakatanga kuparadzanisa iyo yakagadzirirwa Kit nokuda kwehukuru sezvo kutamba kwakakunda maviri Olivier Awards uye yakawana Harington zvakanyanya kuzivikanwa.
Makore akazotevera, akaongorora uye akaisa hurukuro yake yekutanga terevhizheni saJon Snow mumutambo weTV. Basa rake mumakwikwi rakamuita iye vakawanda uye naizvozvo akaita kuti ave mumwe wevanonyanya kubhadharwa pamuterevhizheni, vachiwana mubhadharo wekodzero we £ 2 mamiriyoni panguva ye Game of Thrones !. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Kit Harington Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Ukama Hupenyu
Pakati pevanhu vose vanozvikudza, mwoyo weKit Harington hupenyu hunoerekana hwava kushamiswa hwakapiwa kuti akanga ane hukama hutatu hwakapfuura asati agadzirisa kuroorana. Vanasikana vanobatana muhukama hwake hwekupedzisira vatatu ndiAna Cyzon (2013) Rachel McAdams (2013) uye Grazi Massafera (2016). Kunyatsoongorora humwe hunoita hukama hweKit hwakaratidza kuti vose vaiva vashandi, chizivo chekuti mukadzi wechipi aizotora Married.
Kit Harington Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Vanoda MuMotion Picture
Kunyange zvazvo Harington akasangana nomudzimai wake, Rose Leslie kokutanga apo nguva yechipiri ye "Game of Thrones" yakatanga kutora firimu mu2011, vakaita zvakawanda zvavanogona kuchengetedza hukama hwehukama hwavo pachavo kusvikira 2016 pavakatanga kubuda pachena kuvanhu 2016 Olivier Awards sevakaroorana.
Kutsigira nyaya yavo panguva yehurukuro neVogue Kit Harington yakaratidza kuti "akawirwa murudo" paaifunga "Game of Thrones" muIceland. Maererano naKit:
"Kana iwe wakatokoshesa kune mumwe munhu, uye zvino ivo vanofarira rudo rwako munharaunda, zvinova nyore kwazvo kuti ude murudo"
Vaviri vacho vakataura zvavakaita mu2017 uye pakupedzisira vakaroora pa 23rd yaJune 2018.
Kunyange zvazvo imba yavo isingapfuuri mwedzi (panguva yeiyi post) vazhinji havagoni kumirira kuona vaviri vacho vachiita vana uye nekuwedzera vanoparidza kuwedzera kuHarringtons.
Kit Harington Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Upenyu hweMhuri
Kit Harington inobva kune imwe mhuri yeBritish. Nhoroondo yacho ndeyokuti Harringtons ndeyezvizvarwa zvakananga zveMambo Charles II, uye sekuru vake is baronet.
Baba: Kit Harington baba, David Richard Harington akanga ari bhizimisi aiva nechitoro chebhuku. Iye anobva kumhuri yakakurumbira uye anoburuka kubva mumatende akawanda, Zvipfeko, Vezera, Dukes, uye Zvitsva. Kunze kwekupa mutsigiro wezvakanaka kune chigadziro paakaita basa rake kuti riite uye rakatsigira basa romwanakomana wake kusarudza.
Amai: Kit Harington Amai, Deborah Jane Catesby ndiye mutambi wemhanzi uye muongorori ane zvakawanda zvakabatanidzwa muupenyu hweKit uye hwehutano hunokosha hunosanganisira kutora Kit kumitambo uye kuverenga kunoterera kune kunzwa kwake paaiva mwana.
Hanzvadzi konama: Kit Harington ane hama, John "Jack"Harington. Kusiyana netambo, John haasi mutambi uye akabudirira mukuchengetedza hupenyu hwake pachake kunze kwemaziso anotarira vanhu.
Kit Harington Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Movies Facts
Kit Harington yakaratidza mune mamwe mafirimu kunze kweMutambo weTrones series. Gara shure apo tinounza mutsara wezvinyorwa zvemafirimu aya uyewo basa raakamboita
Kit inoratidzika se Vicent Smith mumufirimu Silent Hill: Zvakazarurwa izvo zvakatanga mugore re 2012
Kit inoratidzika se Milo mumufirimu Pompeii izvo zvakatanga mugore re 2014
Kit is the voice actor behind Eret mumufirimu Nzira Yokudzidzisa Dhiana Dzako 2 Inotangaidzwa mu2014
Kit yakaita basa rayo Ronald Leighton mumufirimu Testamente yeVaduku izvo zvakatanga mu 2014
Kit yakaita basa rayo Billy Bradley mumufirimu Seventh Mwanakomana izvo zvakatanga mu 2014
Kit yakaita basa rayo Will Holloway mumufirimu Mukuru Akanaka izvo zvakatanga mu 2015
Kit yakaita basa rayo Samuel mumufirimu nesarufa izvo zvakatanga mu 2016
Kit yakaita basa rayo John F. Donovan mumufirimu The Death and Life of John F. Donovan izvo zvakatanga mu 2018
Iyeye zvakare izwi rekuita shure Eret mumufirimu Nzira Yokudzidzisa Nyoka Yako: Nyika Yakavanzwa yakagadzirirwa kuMunyori mu 2019
Kit Harington Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Other Facts
Kit Harington amai vakamutumidza mushure meChristopher Marlowe, ane zita rokutanga rakapfupiswa kuna Kit, zita rinonzi Harington rinoda.
Kit nationality ndiBritish uye ndeyeChirungu, Scottish, Northern Northern Ireland, Welsh, uye Dutch madzinza.
Akanga aine chibvumirano naRose mberi kwekugadzirisa nokuti akawana mamiriro ekuda uye achibvumira. Kutaura na Zuva Kit akabudisa pachena kuti:
"Ndakanga ndiine zvirongwa zvokuzviita, ndaizoenda kune dzimwe misiri mumiti uye ndoita zvinhu zvose zvepabonde, asi takanga tiri munyika, uye takanga tiri pasi pehusiku husiku hwakanaka, uye takanga tine gomba remoto kutsva uye waini tsvuku-uye ndakapura mutoro wangu mangwanani. "
Haasi pa Twitter kana Instagram chikonzero nokuti haadi kuti vanhu vatarise hupenyu hwake hwega. Maererano naKit:
"Handidi kuti vanhu vafunge kuti vanondiziva panzvimbo yemunhu ... asi zvakakosha kuti vanhu vatsanangurire pane kuziva chokwadi."
Vongai nekuverenga kwedu Kit Harington Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At ChildhoodBiography, isu tinoedza kururamisira uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe taura nesu!